Kuwa Eebe ka dhawrsada waxay leeyihiin liibaan.
Beero iyo Cinabyana way heli.
Waxayna Guursan Haween da'yar oo isle eg.
Waxayna heli Cabbid wanaagsan.
Jannada kuma dhexmaqlaan hadal macna la'aan ah iyo is beenin midna.
Waa abaalmarin Eebe uu siiyay oo ku filan.
Eebaha Samada iyo Dhulka iyo waxa u dhexeeya waa Allaha Raxmaan ah, Hadal wax ku soocelinna ma jiro (Qiyaamada).
Maalintaasi waa sugantahay ee Ruuxii doona Eebe xaggiisa meeluu ku noqdo ha ka samaysto.
Waxaannu idiinka digaynaa Cadibaad dhaw Maalinta uu arki Ruux walba waxay Gacmihiisu hor marsadeen, Gaalkuna uu dhihi Shallaytadaydee maan Carro noqdo.
Eebe wuxuu ku dhaartay Malaa'igta Nafta si daran uga siibta (gaalada).
Iyo tan si fudud uga qaadda (mu'miniinta).
Iyo Malaa'igta Hawada Dabbaalata (si amar fulin).
Iyo tan u orotanta wanaagga.
Iyo kuwa Maamula amarka (Eebe).
Maalinta ay gilgilan afuufka (hore).
Oyna raaci tii dambe (waa sugantahay).
Qalbiyaduna Maalintaa way cabsan.
Araggeeduna wuu dullaysnaan.
Markaan noqonno Lafo duugoobay.
Waxay dheheen taasi waa noqosho khasaara ah.
Waa uun Hal Qaylo kaliya.
Markii Eebe uga yeedahy Toggii barakaysnaa ee Dhuwa.